​တရားဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သော အကူအညီ လိုအပ်ပါသလား? Burm​ese
​ တရားဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သော အကူအညီ လိုအပ်ပါသလား? (Audio)
အကယ်၍သင်သည် တရားဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သော အကူအညီလိုအပ်ခဲ့လျှင် သင့်အနေနှင့် LawAccess NSW ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီ တောင်းနိုင်ပါသည်။ 1300 888 529 ကို တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ (အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များမပါ) နံနက် ၉နာရီမှ ညနေ ၅နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပါ။ သင်စကားပြန်လိုအပ်ပါက ဘာသာပြန်နှင့်စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှု (TIS) ကို 131 450 တွင် ဖုန်းဆက်ပြီး LawAccess NSW ကိုခေါ်ခိုင်းပါ။​
11/07/2017 9:27 AM